नेता कसरी बन्ने ? – Stories of Sandeept
नेता कसरी बन्ने ?
On November 9, 2017 November 9, 2017 By sandeept252In नेपाली, Blogging, Humanity, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, Politics, Public Interest
अलि पुरानो फोटो नेताहरूको । स्रोत: nayasamachar.com
नेपालमा अहिले चुनावी चहलपहल निकै नै छ । नेताहरू घरदैलोमा व्यस्त छन् तर घरमै बस्नेले चाहिँ सायदै तिनका मुख देखे होलान् । खैर, “तिनीहरू नेता कसरी पो नेता बने हौ ? अनि हामी चाईँ कसरी बन्ने ?” भन्ने प्रश्न कसैलाई उठेको भए ती प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास यो प्रबन्ध हो ।
चरण १: यी प्रश्न आफूले आफैँलाई सोधेर नेता हुने गुण छ कि छैन पत्ता लगाउनुस् :
१. धुर्त हुनुहुन्छ ?
२. अरूलाई औँलामा नचाउन सक्नुहुन्छ ?
३. स्वार्थी हुनुहुन्छ ?
४. अर्काको मन दुखाएर हाँस्न सक्नुहुन्छ ?
५. आफन्त, नातागोता, साथीसँगी, गुरु वा जोसुकैलाई कोखामा छुरा हानेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ?
६. जनताले जे भने पनि कानमा तेल हालेर सुतेजस्तो गर्न सक्नुहुन्छ ?
उपर्युक्त गुणहरू तपाईंसँग छ भने मात्रै तपाईं राजनीतिक नेता बन्न सक्नुहुन्छ । नत्र त तपाईंको यात्रा सुरु नै हुँदैन । भइहाल्यो भने पनि कतै कुनामा बसेर रुनुपर्छ ।
चरण २: प्रवेश
चरण १ मा पास नभए पनि चरण २ मा आउन सक्नुहुन्छ तर दिगो उपलब्धिका लागि चरण १ मा भएका कुराहरू आफूमा जतिसक्दो चाँडो लागू गर्नुहोला । फाइदा तपाईंलाई नै हो । अब जान्नुस् यो चरणमा के गर्ने:
१. तपाईं आफ्नै पार्टी खोल्न चाहनुहुन्छ ? यसका लागि विचार र (वा) कार्यशैली मिल्ने (यसमा अरूलाई थर्काउने कार्यशैली पनि हुन सक्छ) एकदम धेरै मानिसहरू भेला पार्नुपर्ने हुन्छ । अरूलाई कन्भिन्स गर्न पनि धेरै समय र उर्जा खर्चिनुपर्छ । समय अलि बढी नै लाग्न सक्छ यदि तपाईं चरण १ मा भएका गुणहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै हुनुहुन्छ भने ।
२. यदि तपाईंलाई छिटो माथी जानु छ भने चाहिँ स्थापित पार्टीमा लाग्नुस् । धेरैजसो मानिसहरू ठूला पार्टीको सदस्य बन्छन् तर साना पार्टी पनि शानदार पो हुन्छन् त ।
एउटा उदाहरण दिउँ है त । मेरो कलेजमा थुप्रै पार्टीका भ्रातृ संगठन (भन्नलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) छन् । नेपाली कांग्रेसको नेविसंघ र नेकपा एमालेको अनेरास्ववियुमा लाग्नेहरूको संख्या धेरै छ । खिचातानी पनि यिनमै धेरै छ ।
साना पार्टीका भ्रातृ संगठन धेरै छन्, कार्यकर्ता थोरै । कम्पिटिसन शून्य बराबर । सदस्य बन्नेवित्तिकै माथिल्लो पद हातमा । अनि पावर पनि ठूला संगठन जति नै । हेर्नुस् त काइदा !
कुन ठाउँबाट राजनीति सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्दछ तपाईंको जिन्दगीमा । एक चोटि फेरि मेरो कलेजतिर आँखा डुलाऔँ । तपाईँ प्रायः देख्नुहुनेछ, नेताहरू :
नयाँ विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न मद्दत गर्दै हुन्छन् ।
पुराना विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्दै हुन्छन् ।
विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन् ।
यिनीहरू पब्लिक रिलेसन (Public Relation) बनाइरहेका छन् जुन भविष्यका लागि लाभदायक हुन्छन् । मेरो एक जना साथी छ जसलाई म जुनसुकै बेला फोन गरेर जुनसुकै काम लगाउन सक्छु । भोलि ऊ कुनै चुनावमा उठ्यो भने म भन्दिन्छु नि “यसले काम गर्न सक्छ” । उसले यसरी भोटर कमाउँदै छ ।
आफ्नो समुदायमा राजनीति गरेर अघि बढ्न चाहनेलाई चुनौतीको पहाड नै आउँछ । चरण १ मा भएका गुण नभए पहाड फोर्न गाह्रो हुन्छ ।
चरण ३: कुटनीति / चालबाजी
महाभारतमा शकुनिको भूमिका सम्झनुस् त । कसरी धृतराष्ट्र र उनका छोरालाई भड्काउँछन् । उनको धुर्त्याइँले पाण्डवहरू जुवामा मात्र हारेनन्, कुरुक्षेत्रको युद्ध पनि भयो ।
कुटनीतिक चालबाजी एउटा कला हो । राजनीती गर्नेहरूले आफूले भनेको ठीक, अरूले भनेको बेठीक भन्ने पारेर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्छन् । अझ कतिपय अवस्थामा अस्थिरता ल्याइदिन्छ्न् ।
गेम अफ थ्रोन्समा लिटलफिङ्गर भन्छ:
अस्थिरता सिँढी हो ।
यसका उदाहरणले मेरो मुटु चिरिन्छ । हाम्रा नेताहरूले पनि अस्थिरतालाई भर्र्याङ् बनाएका छन् । जब स्थिरता आउँछ, उनीहरू माथि हुन्छन् । पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) ज्वलन्त उदाहरण हुन् जसको बारेमा मैले चर्चा गरिरहनै पर्दैन ।
कोखामा छुरा घोप्ने काम पनि चालबाजीको विशेषता हो । एकजना मेरो छिमेकीलाई चुनावमा “टिकट” दिने वाचा गरियो । पक्का आउँछ भन्दै बधाई दिने पनि भेटिए ।
मनोनयनमा भने उनको नातेदारको नाम आयो । ती नातेदारले विरोध गरेनन् । मनोनयनमा हेराफेरी गर्न सक्नेलाई ती नातेदारले हातमा लिएछन् । यसरी आफन्तलाई पनि धोका दिन सके तपाईंको राजनीतिक यात्रा उकालो लाग्नेछ । शुभकामना !
चरण ५: अरूले जेसुकै भने पनि “बाल” नदिने
अरूले तपाईंको गल्ती औँलाइदिए भने तिनको औँला काटिदिनुस् । यो त तपाईंले सुनेको प्रमाण पो हो क्यारे ! यसो गर्नुस्, सुन्दै नसुन्नुस् । हुन त यो गुण तपाईँमा पहिले नै छ । जति गाली गरे पनि, जति सरापे पनि, एउटा कानबाट छिरेको कुरो अर्को कानबाट निकालिदिनुस् । यसो गरेपछी न अरूको पिर, न प्रेसरको चिन्ता !
१. यी चरणहरूलाई नजरअन्दाज गर्न त तपाईं राजनीतिक परिवारमा जन्मिनुपर्छ । बा प्रभावशाली थिए भने त उनले बसाएको जगमा चुनावैपिच्छे जीत दर्ता भइहाल्छ ।
२. माथि उल्लिखित चरण र गुणहरूमध्ये पब्लिक रिलेसन र सानो पार्टीबाट उक्लिने उपायबाहेक अरू सबै व्यङ्ग्य हुन् । सिधा भन्ठानेर त्यसै गर्नुभो भने मलाई अवगाल नआओस् !
अझै सजिलो बनाइदिन्छु । यी काम नगर्नुस् :
नकारात्मक चालबाजी नगर्नुस्
कोखामा छुरा नहान्नुस्, जेल पर्नुहोला !
रचनात्मक प्रतिक्रियालाई आत्मसात् गर्नुस्
३. नेतामा हुनैपर्ने दुई कुरा हुन् : ज्ञान र बोल्ने क्षमता । यी दुईलाई प्राथमिकता दिनुस् ।
[प्रस्तुत लेख Quora.com मा How do I becomeapolitical leader in Nepal को जवाफको नेपाली रूपान्तरण हो ।]
Communist Alliance: “A Game of Probabilities”
5 thoughts on “नेता कसरी बन्ने ?”
हाम्रा देशमा नामकै मात्र नेता छन,यो लेख पढे देखि कुसल नेता बन्थे कि अंकित जिइ😅😅
मलाई भन्दा धेरै राम्रोसँग उनीहरूलाई नै थाहा छ दीपक 😀
November 10, 2017 at 5:15 am	 Reply
I can’t find my translation button on this I-pad thingy. 😀
November 10, 2017 at 12:42 am	 Reply
You don’t need it. The link in the last sentence is the original post in English 😀
November 10, 2017 at 5:13 am	 Reply